Hyde Irish Whiskey ukubuyekeza: 10 Cask YO kukaMongameli
Stuart libuyekeza nogologo zakamuva ezivela bomdabu West Cork wakhe futhi uthola izixhumanisi phakathi uMongameli, River Dance futhi Single Malt Irish Whiskey.
Douglas Hyde, uMongameli wokuqala Ireland khona uhlamvu engavamile. Wakhulela e-French Ipaki Co. Roscommon ngawo-1870 lapho uyise li Protestant wendawo wathutha nomkhaya wakhe ngemva Douglas wazalwa. wafika uyise Douglas le uMfundisi Arthur Hyde kusukela Hyde umndeni ka Castle Hyde eduze Fermoy e Cork. Uma igama umsindo ajwayelekile, Castle Hyde manje omuhle obuyiselwe njengoba ikhaya edumile Irish American Dancer Michael Flatley of River Dance udumo.
Hyde Irish Whiskey – Imvelaphi
Njengoba bevela isiko yamaProthestani e-Ireland, kwakungavamile kakhulu ukuthi Douglas ngabe sihlakulele isithakazelo ulimi Irish okwakukhona namanje ulimi elizwakalayo abasebenza West-Ireland. Kodwa lapho Douglas njengoba ingane wahlangana futhi adle ingevu nge endaweni ozalwa French Ipaki izingane, ikhono lakhe ngesikhathi Abama Roscommon lwesigodi zolimi Irish ayebonisa ekuseni impumelelo yakhe ezifundweni zesikhathi esizayo e Trinity College Dublin njengesazi nengcweti ovelele Gaelic, zezemfundo, sezilimi futhi Irish ulimi revivalist.
Ukulandela isisekelo Irish eFree State 1922 emva Olusheshayo, Douglas Hyde wayengomunye walaba izifundiswa inyuvesi lokuqala ukuba abaqokelwe Irish ePhalamende Upper House noma iSigele e 1925.
Ukwamukelwa soMthethosisekelo lokuqala Irish e 1937 ngokuthi uma kukhethwa i uMongameli Irish futhi Senator Douglas Hyde ngubani kwabonakala umuntu kokubili imfuyo zezemfundo kanye namasiko, wakhethwa kokuphikiswa ukhetho njengelungu bavumelana ukumela zisengela, non-amahlelo Ireland yesimanje.
Ngazi kanjani kangaka Douglas Hyde? Awu yami ngasekupheleni nokunye wayemthanda umfowabo omncane Douglas noma Doug, owakhulela nami West Cork, yethiwa uMongameli wokuqala njengoba umndeni ethu ebanzi futhi wabelane engavamile futhi yaphambanisa Catholic loyalist – AmaProthestani isizinda wobandlululo e pre ukuzimela Ireland. Njengoba uStuart Redmond McNamara, Mina yethiwa YamaProthestani wobandlululo Charles Stewart Parnell kanye Irish Ikhaya Rule Champion John Redmond. futhi yebo, Ngiyazi ukupela igama lami uStuart, kodwa lokho omunye indaba!
Ngakho lapho Conor Hyde, i-MD ye Hyde Whisky waxhumana nami emasontweni ambalwa edlule ukungitshela mayelana yakhe entsha Hyde Whisky Ilebula ezisebenza kusuka ebuntwaneni ikhaya lami West Cork, Ngabheka skywards wathi, Doug, Ubungeke nginithandile nalena!
Hyde Irish Whiskey 10 UMongameli nonyaka owodwa ubudala sika Cask Limited Reserve Single Malt ukubuyekeza
Hyde Whisky kuyinto entsha Irish nogologo ibhizinisi futhi akufanele kudidaniswe yimuphi omunye izinkampani nogologo e West Cork. Enibaziyo amasha Irish Whiskey Qala Ups, ukukhululwa kwabo kokuqala kusekelwe ngumnikelo izinga okusezingeni ukuthi Hyde baye basebenza umlingo wabo ku kusukela distillery esungulwe. Esimweni esinjalo, Hyde baye kumthombo iminyaka eyishumi lwemithombo ubudala olulodwa kusukela Cooley ezinzile wavuthwa kuqala yokugcwalisa ilangabi ushiswe Kentucky Bourbon emiphongolweni kanye usuphelile vintage sherry emiphongolweni i ubumnandi extra mellow.
Lena imodeli yebhizinisi futhi esetshenziswa eziningi nezinye izinkampani ezintsha nabasafufusa Irish nogologo kuhlanganise Teeling futhi Walsh Whisky. Njengoba nogologo Irish kuthatha 3 ukuze 5 iminyaka nokuningi ukuvuthwa ngemva ziphuzo zazihluzwa, the whiskeys engeyokuqala eyakhishwa la izingane ezintsha ku block ngokuvamile customisations ezintsha futhi okuthakazelisayo izinga whiskeys kusukela Midleton, Cooley futhi Bushmills. Uma bagcina ukwakha distillery zabo, Hyde basikisela ukuthi kuyoba mayelana 5 eminyakeni engaphezu phambi nogologo kusukela okumile yabo uzolunga ukukhishwa.
Conor Hyde wayenomusa ngokwanele ukungithumelela ibhodlela zabo 10 UMongameli nonyaka owodwa ubudala sika Cask Limited Reserve Single Malt ukubukeza. Kuba unpeated double esinamandla lwemithombo olulodwa eye eseqedile izinyanga eziyisithupha Oloroso Spanish Oak Sherry emiphongolweni. Lokhu kukaMongameli Cask lokukhishwa edition elilinganiselwe nje 5,000 amabhodlela kanye ibhodlela ngayinye olunezinombolo. Bottled ngesikhathi ephakeme kunaleyo evamile 46% ABV, liphinde non obandayo ehlungiwe ukuyishiya igcwele ukunambitheka eyizingqabavu malty.
Ikhala:On the ekhaleni, Umuthi we-oki intombi ngowokuqala yokugcwalisa Bourbon imiphongolo kuyinto evelele ngemva kweminyaka eyishumi nokuvuthwa. Kukhona izithelo njengoba kulindelwe ethonyeni sherry okuyinto kungikhumbuza amnyama Irish Fruitfield Marmalade. Ikhala mufushane kunami ngabe kulindeleke.
Nambithani:Tasting, umbono wokuqala lwemithombo ezisindayo yokugcwalisa umlomo efudumele futhi igcwele. Nalapha, Umuthi we-oki ngempela liphinyiselwe kanye nabathile izithelo ezibabayo-amnandi omisiwe futhi ingadi yezithelo yona isibhekwa izithelo, wokushiswa kwesihlahla se-okhi amanothi emnyama spiciness. Kuyamangalisa bushelelezi olimini ukuba nogologo double distilled ngesikhathi 46%! Ukwengeza ukusaphazela yamanzi kuveza ibhola ithatha bushelelezi futhi mellow lwemithombo ukuba ashwibeka esandleni.
Qeda:Umbala nokuthi eside ubuswa kwesihlahla se-okhi wokushiswa kanye pepper wezwakalisa ushokoledi ebabayo ngemuva.
I Oloroso Sherry Cask sekugcineni uye nakanjani wanezela magic ezinye real kule lwemithombo engu eyishumi ubudala. Ukuhlolwa ezithakazelisayo kungaba ukulandela Distillers Irish green Spot - Yellow Spot imodeli ubone ukuthi 12 noma 15 ngonyaka okufana ubudala wabhanselwa 2 ukuze 5 neminyaka Sherry noma ezinye thonya ukukhiqiza!
Ngemuva Hyde Whisky!
Kodwa ngokwanele mayelana whiskey. Kuthiwani Abantu ngemuva Whisky? Sekuyisikhathi eside Ngacabanga ukuthi ikusasa ngamazwe Irish nogologo ukumaketha itholakala umehluko sizihlukanise run the Scotch lokugaya noma Bourbon nge ezintsha imikhiqizo emisha njenge Hyde. Kufanele futhi ukutshela izindaba ezinkulu siqu mayelana likagologo abantu abazenzela! Njengoba ubona kulesi konke okungenhla, Hyde Whisky inendaba nengxenye ukutshela futhi ayaqala nje ohambweni lwabo.
Kokuxoxa onjengendodana Conor Hyde uyintokozo. He is nesizotha, professional, abanothando futhi disarmingly evulekile lapho ukhuluma ngani Hyde Whisky. Njengoba ubona kusukela imidwebo kule ukubuyekeza, the yokubeka uphawu lokhu kokuqala Hyde Whisky ukukhululwa isezingeni eliphakeme kakhulu With References fake enokulinganisela Hyde umkhaya wakhe, Izixhumanisi kaMongameli, Irish Umlando West Cork ukuxhumana.
Ngicabanga ukuthi esiyibonayo ukubuya izinga nogologo Irish eNtshonalanga Cork nge ukuzalwa entsha ethokozisayo Irish Whiskey Ilebula. Umfowethu Doug kwakuyoba sabalandeli sabo enkulu!